Ọzara Sahara: njirimara, mmalite, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Ikekwe Ọzara Sahara ga-abụ onye a kacha mara amara n’ụwa. Ọ bụ ala ịkpa nke na-enweta ihe na-erughị cm 25 nke mmiri ozuzo kwa afọ ma nwee obere ahịhịa. A na-ahụta ọzara dị ka ezigbo ụlọ ọrụ okike iji mụọ mmekọrịta nke ifufe na mmiri na mbara ala nke mbara ala. Ha nwere akụ ndị bara uru dị na mbara igwe nke ikuku na mmiri ozuzo na-aga n'ihu na-ekpughere.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido, ihu igwe, okpomoku, ahịhịa na ahịhịa nke ọzara Sahara.
2 Ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ nke ọzara Sahara
3 Osisi ala na umu ahihia nke ohia Sahara
Ọ bụ otu n'ime oke ọzara kachasị mkpa n'ụwa ma ọ dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mpaghara Afrika. Ihe mejuputara ya bu ala buru oke nkpo site na Atlantic Ocean rue Oke Osimiri Uhie. Ọ dị nso n’Oké Osimiri Atlantic n’ebe ọdịda anyanwụ na Ugwu Atlas na Osimiri Mediterenian n’ebe ugwu. Ebe ọzara a malitere kemgbe ọtụtụ nde afọ. Osisi na ala ahịhịa jupụtara na mpaghara a dum wee kpuchie oke ọhịa. Ọ bụ ebe ọtụtụ ndị dinta na ndị nchịkọta na-ebi ndụ na anụmanụ na osisi. Ọ bụ n’oge ahụ ka a na-akpọ ebe a Green Sahara.
Ebe ọzara sitere n'eziokwu bụ na ọ nweghị mmiri ozuzo edere nke na-achịkwa iji kwado nguzozi n'etiti evaporation nke ụzarị anyanwụ na ntụgharị nke osisi na oke mmiri ozuzo. Ya mere, mgbe ihe omume okirikiri nke oge ọkọchị chịkọbara na enweghị iru mmiri na-akpata insolation ọzọ.
Ihe dị ka afọ 7 gara aga ka e guzobere ọzara a. Oké Osimiri Thetis dị na mpaghara a ma ozu ya na-akpọnwụ. Site na ozara a malitere igosi bu ahia nke eji ehi na ugbo ala. Dịka anyị kwurula na mbụ, na mbido oge ọ bụ ọhịa ndụ akwụkwọ ndụ nwere mpempe akwụkwọ wee nwee ọtụtụ anụmanụ. Usoro nke oke ọzara kachasị ukwuu na mbara ala dị nwayọ nwayọ ma na-aga n'ihu. O were ihe dịka afọ 6.000 wee gwụchaa afọ 2.700 gara aga.
Ekwesiri iburu n'uche na site na usoro nke oke nkpu agha nke na eyi egwu otutu ala nke uwa a, oke ohia a puru iru na ogologo oge. Spain nwere akụkụ buru ibu nke ókèala nke ọzara na ọzara na-eyi egwu. Akụkụ nke ala nwere ike ịghọ ọzara ma ọ bụ mpaghara ọzara ọkara.
Ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ nke ọzara Sahara
Fọdụ ụfọdụ njirimara pụrụ iche nke ọzara a bụ na a na-ahụta ya ọzara kachasị n'ụwa. A na-ahụta ya dị ka otu n'ime mmiri kachasi sie ike yana nke nwere oke okpomọkụ. Anụmanụ na osisi ole na ole bi ebe ndị a ebe ọ bụ na enweghị ndụ ma ọ bụ nri dị mkpa iji kwado onwe ha. N'ime ọzara ndị a bi agbụrụ ndị Tuarec na Berber. Anyị maara na ala ndị dị na mpaghara ndị a pere ezigbo mpe na ihe gbasara arụ, ya mere ọrụ ugbo abụghị nhọrọ. Ihe mejupụtara ala ahụ bụ gravel, ájá na dunes. N'ime ụdị ala a, ọ nweghị ike ịnabata ndụ na-aga n'ihu nke nwere ike ime mgbanwe maka gburugburu ebe ndị a. Ebe ọ bụ na a na-ekwubiga okwu ókè banyere oke okpomọkụ nke ehihie na abalị nke ukwuu, o siri ike ụdị ụdị ihe ọkụkụ ọ bụla ga-adị ndụ.
Ihu igwe nke ọzara Sahara ihe e ji mara ya bụ ụbọchị anwụ na-acha, ehihie na abalị. Mmiri ozuzo bụ ihe dị ịtụnanya na mgbe ọ ga-eme n'ike n'ike. Mmetụta nke oké osimiri n'akụkụ a nke Africa na-emepụta iru mmiri dị elu na mbara igwe, nke mere na nkịta na-agakarị n'ụsọ oke ọzara.
N'ihe banyere okpomọkụ, ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'oge ọkọchị, ya mere okpomọkụ dị oke mma ma ọdịiche dị n'etiti ehihie na abalị dị oke elu. Ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu nke enwere ike iru site na kwesịrị ịdịkarị n'etiti ogo 46. N'akụkụ aka nke ọzọ, n'abalị ọ nwere ike iru okpomọkụ nke ihe ruru ogo 18. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịkwa oke oke ọnọdụ okpomọkụ. A na-ahụkarị mmetụta ụgbọ mmiri, yabụ nkezi oke okpomọkụ bụ ogo 26 na ụsọ oké osimiri na ndị dị n'ime dị gburugburu ogo 37.
Osisi ala na umu ahihia nke ohia Sahara
Anyị maara na n'ehihie n'ọzara ahụ okpomọkụ na anwụ na-achasi ike ma na-ata ụwa egwu. Okpomoku nke anwu anwu na iru mmiri na-emetụta gburugburu. Enweghị isi mmiri ma ọ bụ mmiri ozuzo ugboro ugboro okpomọkụ na iru mmiri dị oke. Otú ọ dị, n’abalị, okpomọkụ na-ada nke ukwuu, ọbụna n’ụbọchị ụfọdụ ị nwere ike ịjụ oyi. Ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ ka okpomoku nke dị n’ehihie anaghị akwụsị akwụsị. Ikwesiri iburu n’uche na, inwe igwe gbachapụrụ agbachapụ, ị ga - ahụ ihe ngosi kpakpando dum.
Osisi na umu anumanu nke sahara di oke nfe n'ihi oke onodu. Nwere ike ịchọta ụfọdụ anụmanụ dịka kamel na ewu na-eguzogide ọnọdụ ndị a. Otu n’ime anụmanụ ndị a nabatara nke ọma gburugburu ebe a bụ akpị na-acha edo edo.. Ọ bụ onye ọkà mmụta banyere mmadụ na-egbu egbu nke na-ekpe ekpere ruo ọtụtụ ụbọchị na ọ gaghị ahụ gị n'ụzọ. Speciesfọdụ ụdị nke fox, antelope ọcha, dorcas gazelles na ụdị ndị ọzọ nwere ike ịdị ndụ na gburugburu ebe a. Ha enweela ọtụtụ usoro mmegharị n'ime ọtụtụ puku afọ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta agwọ n'ọtụtụ ntụ ọka, nkịta ọhịa nke Africa, ụfọdụ agụ iyi na nnụnụ nnụnụ Africa a na-akwụ ọlaọcha.
Banyere ohia nke ahihia, ahihia di oke mkpụmkpụ n'ihi ntakịrị mmiri. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ahịhịa adịghị. Osisi ole na ole dị adị jisiri ike imeghari na gburugburu ebe obibi ma ya mere na-achọ iji belata ọnụego evaporation ma mee ka mmiri dịkwuo mmiri. Nke a bụ ihe kpatara osisi ole na ole dị nwere obere akwụkwọ na anụ ahụ na mgbọrọgwụ dị ogologo. N'ihi ya, ha na-agbakọta mmiri na anụ ahụ na epupụta kpuchiri wax. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ osisi dịka Roses nke Jeriko, na Cystanche, na zilla, na apụl nke Sọdọm.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ọzara Sahara na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ọzara Sahara